ရေး - အငဲ ဆို - မျိုးကြီး နူးညံ့လွန်းတဲ့ သတို့သမီးခြေလှမ်းများ နှလုံးသားကိုနင်းလို့ချေသွား မင်းပါးပြင်လေး အလှဆုံးပန်းနုနှုတ်ခမ်းလေး ငါနောက်ဆုံးနမ်းရှိုက်ချင်တုန်း ငွေရောင်လွှမ်းသော လက်ထပ်ပွဲ ထာဝရစတေးရစ်ခဲ့ပြီ ငါ့နှလုံးသားတွေ အပြာရောင်မီးများကျွမ်းလောင်သွား ဈာပနမီးမြိုက်သဂြိုဟ် အချစ်များစွာ တို့အချစ်များ ဆုံးရှုံးပြီအသိတွေလှိုင်းရိုက်နေသလို နှလုံးသွေးတွေစုန်ဆန်ကူးခတ်နေ မင်းလေးရဲ့မျက်ရည် မကြည့်ရက်ပါ အချစ်ရဲ့ ငါတစ်ယောက်တည်းကျိတ်မှိတ်ငိုကြွေးရင်း အိုး အို တို့အချစ်များ ကျွမ်းလောင်မီးတွေထဲ အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီ Yeah! Yeah ရင်ထဲမီး အို တို့အချစ်များ အိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီ Ah! ငွေရောင်လွှမ်းသော လက်ထပ်ပွဲ ထာဝရစတေးရစ်ခဲ့ပြီ တို့နှလုံးသားတွေ တို့အချစ်များ တို့အချစ်များ ဟေး! မီးကျွမ်းလောင်သွားကြ (Na Na Na Na) တို့အချစ်များ (Na Na Na Na) မီးကျွမ်းသွား နှလုံးသားများက်ုစတေးရစ်ခဲ့ကြ (Na Na Na Na) ငိုနေလား အို ငိုနေလား ဘေဘီ (Na Na Na Na) အပြာရောင်အပူမီး (Na Na Na Na) အဆုံးသတ်ပြီတို့အချစ်တွေ (Na Na Na Na) အို အချစ်များ